UsabilityHub: Ipa uye Tora Imwe Dhizaini kana Usability Mhinduro | Martech Zone
UsabilityHub: Ipa uye Tora Imwe Dhizaini kana Usability Mhinduro
Chitatu, July 1, 2015 Chitatu, July 1, 2015 Douglas Karr
Tinofanira kuenda ku Enda Inbound Kushambadzira musangano wakaitwa mudunhu ne Element Chitatu. Chakanga chiri chiitiko chakanakisa chine mutsetse unoshamisa-wevanokurudzira uye vatauri vekudzidzisa. Imwe yematauri yaive Oli Gardner, mubatanidzwa we Rebounce avo vakarongedza pamwechete heck imwe yemharidzo pane kukosha uye kukanganisa kwekuyedza.
Tichagovana imwe yemharidzo yakapihwa naOli mumashure mune zvakatumirwa, asi ini ndaida kugovana chimwe chishandiso chaakatizivisa icho icho chaanonyatsoda… UsabilityHub. UsabilityHub inokutendera iwe kuti ugovane yako yazvino logo dhizaini kuti uone maitiro ayo, kugovera akasiyana mavhezheni eiyo peji kuti uone kuti ndeipi inosarudzwa, kana kuwana mhinduro pane uko vashandisi vangafambe pane yako saiti kuti vawane chimwe chinhu.
Unogona nyorera pasina muripo uye uve mushandisi wesaiti kuti upe mhinduro kune vamwe vashandisi. Mhinduro kubva kune vanoedza iwe vaunokoka mahara. Mhinduro dzakarairwa kubva munharaunda yeUsabilityHub yakadhura 1 chikwereti chimwe nechimwe. Mhinduro kubva kune vanoedza ehuwandu huwandu hwevanhu dzinodhura matatu makiredhi rimwe nerimwe. Munogona mese kuwana zvikwereti nekuyedza vamwe kana iwe unogona kutenga zvako. Kana iwe ukave nhengo yePro, iwe unogashira 3% kubva pamutengo wezvikwereti.
Heino muenzaniso wakanaka apo kambani yanga ichiyedza kusarudzwa kwetabhu yekufambisa kune yavo saiti:
UsabilityHub ine 4 Usability Miedzo yekusarudza Kubva
Muedzo Wechipiri Wechipiri - Chiyero Chechipiri Chechipiri chinoratidza dhizaini yako kune muyedzo kwemasekondi mashanu chete. Mushure memasekondi mashanu apera, muyedzo anobvunzwa nhevedzano yemibvunzo yaunotsanangudza, senge Unofunga kuti chigadzirwa chipi chinotengesa?, kana Zita rekambani rainzi ani?.
Dzvanya Bvunzo - Iyo Dzvanya Bvunzo Test uko vashandisi vanodzvanya pane yako dhizaini. Muedzo unobvunzwa kuti utevere rairo dzaunotsanangudza iwe, senge Ndekupi kwaungabaya kuti uone yako yekutengera ngoro?, kana Ndekupi kwaungabaya kuti usarudze template ye blog yako?.
Unoda Bvunzo - Yekuda Miedzo bvunza muedzo kuti asarudze pakati penzira mbiri dzekugadzira. Unogona kukumbira vaedzo kuti vasarudze zvichibva pane chimwe chimiro (semuenzaniso. Ndeipi dhizaini inotaridzika kuvimbika?), kana kungovabvunza ivo zvavanosarudza zvakakwana.
Nav Inoyerera Bvunzo - Nav Kuyerera Miedzo kuona kana vaedzo vanogona kubudirira kufamba kuburikidza neyako dhizaini. Iwe unoteedzera akateedzana emapeji dhizaini, uye tsanangura panofanira kudzvanywa nemuyedzo kuti aenderere mberi Kubudirira uye kutadza chiyero kwevaedzo kwakanyorwa pane imwe nhanho.
Tags: dhizaini dhizainipfungwausability hubkushandisika kuyedzwamushandisi kuyedza
Shotfarm: Chigadzirwa Zvemukati Network yeBrands uye Vagadziri
Iko Kukosha kwefoni Kunoshevedza muRwendo rweVatengi